Ukuvulwa ngokupheleleyo kwemida yase-US kubakhenkethi abagonyelwe ngokupheleleyo kukudala kulindelwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ukuvulwa ngokupheleleyo kwemida yase-US kubakhenkethi abagonyelwe ngokupheleleyo kukudala kulindelwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuvulwa ngokupheleleyo kohambo lwamazwe aphesheya oluya eUnited States kubantu abagonywe ngokupheleleyo kugqityiwe kwaye kuya kubonelela ngesimo soqoqosho lwase-US, amashishini okuhamba amakhulu namancinci, nakwiindawo eziya kulo lonke elaseMelika.
Iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo ziya kuvunyelwa ukuba zingene e-US ngokuwela umda womhlaba ukuqala ekuqaleni kuka-Novemba.
Amaziko oLawulo noThintelo lweZifo awukagqityi ukuba zeziphi izitofu eziya kwamkelwa yi-US.
Owona mhla kanye apho izithintelo zohambo ziya kuphakanyiswa uya kwaziswa "kwakamsinya".
Abaphathi abaphezulu baseMelika babhengeze ukuba ukuqala kwinyanga ezayo, ISebe lase-US lezoKhuseleko lwaseKhaya iyakukhulula iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo i-coronavirus kwizithintelo ezingafunekiyo zokuhamba ezisebenza ngoku kwimida yomibini yase-US.
Imithetho, eyakubhengezwa ngokusesikweni nguNobhala Wezokhuseleko Kwilizwe, u-Alejandro Mayorkas namhlanje, iya kubandakanya imida yomhlaba kunye nokuwela isikhephe. Ziyafana kodwa azifani neemfuno ezicwangcisiweyo ezibhengezwe kwinyanga ephelileyo kubahambi ngeenqwelo moya, utshilo amagosa.
Umhla ochanekileyo ekuqaleni kukaNovemba xa izithintelo ziya kuphakanyiswa uyakwaziswa "kwakamsinya," latsho elinye lamagosa aseMelika.
Amasiko aseMelika kunye noKhuseleko lweMida iyakwamkela iphepha okanye ubungqina bedijithali bokugonya, utshilo amagosa ase-US. Inkqubo ye- Centres for Disease Control and Prevention (CDC) akakagqityi ukuba zeziphi izitofu eziya kwamkelwa yi-US, amagosa ongezelelweyo.
Umbutho wezokuHamba wase-US ukhuphe le ngxelo ilandelayo kwisibhengezo sokuba izithintelo kuhambo lomda wase-US kunye ne-Canada kunye ne-Mexico ziya kuphakanyiswa kubantu abagonywayo:
Ukuhamba kwe-US kudala kubongoza ukuvulwa kwakhona kwemida yomhlaba wase-US, kwaye siqhwabela izandla isicwangciso sabaphathi be-Biden sokunciphisa imiqobo yokungena kwabo batyelelweyo. Eli nyathelo liza kuzisa ulwamkelo lokwamkeleka kukhenketho oluvela kwimithombo yethu emibini ephezulu yemakethi yokuhamba ngaphakathi.
“Ukwehla kotyelelo kumazwe ngamazwe okoko kwaqala lo bhubhani kubangele imali engaphezulu kwama-250 eebhiliyoni zeerandi kwimali elahlekileyo yokuthumela kwelinye ilizwe nakwimisebenzi engaphezu kwesigidi e-US. Imida evaliweyo yaseCanada naseMexico yodwa ixabisa uqoqosho lwase-US phantse i-700 yezigidi zeedola ngenyanga.
"Ukuvulwa ngokupheleleyo kohambo lwamazwe aphesheya oluya eUnited States kubantu abagonywe ngokupheleleyo kulindelwe kwaye kuya kunika uqoqosho lwase-US, amashishini okuhamba amakhulu namancinci, nakwiindawo ezinqumla eMelika."